အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်ဆု အတွက် နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပြပွဲ မှာ ဆန်ကာတင် စာရင်းပါဝင်နေတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်နဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – Shwe Likes
လူငယ်ဒါရိုက်တာ ဏကြီး ရဲ့ကြိုးစား မှုတစ်ခုဖြ စ်တဲ့ ” What happened to the Wolf? ” ဇာတ် ကားမှာ အိနြ ္ဒာကျော်ဇင်နဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု တို့နှစ်ေ ယာက်သား ဟာ အတွဲညီညီ နဲ့အချိတ်အ ဆ က်မိမိ သရုပ်ဆောင် သွားခဲ့ပြီး
လက်ရှိမှာတော့ Oldenburg International Film Festival တွင် Seymour Cassel Award for Outstanding Performance အတွက် Nomination တွင် နှစ်ဦးစလုံး ပါဝင်နေ ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားရဲ့ Official Trailer ကို သြဂုတ်လ (၁၄) ရက်နေ့မှာ ပရိသတ်တွေကို ချပြခဲ့ပြီး Trailer မှာတင် အတော်လေး လူကြိုက် များခဲ့ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင် ကားကို မြန်မာနိုင်ငံမှာပြ သခွင့်မရသေးပေ မယ့် ဂျာမနီနိုင် ငံမှ Oldenburg International Film Festival တွင် Official Competitation အတွက် ရွေးချယ်ြ ခင်းခံထား ရပြီး World Premiere အဖြစ် ပြသသွားမ ည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
Oldenburg International Film Festival ကို Oldenburg မြို့တွင် စက်တင် ဘာလ (၁၅) ရက်နေ့မှ (၁၉) ရက်နေ့ထိ ကျင်းပသွား မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ် ကားကာ ဒါရိုက်တာဏ ကြီးရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ နောက်ထပ်ဖန်တီး ချက်တ စ်ခုဖြစ်ပြီး ဟာကွက် မရှိအောင် ရိုက် ကူးထားတယ်ဆိုတာ Trailer မှာတင် သိသာလွန်းေ နပါတယ်။
မြန်မာ့ရုပ် ရှင်ကိုအဆင့်မြင့်ြ မင့်ကြည့်ချင်တဲ့ပရိသ တ်တွေအတွ က်တော့ မျှော်ရကျိုးန ပ်မယ့် ဇာတ်ကားကော င်းဖြစ်လာမှာပါ။
ဇာတ် ကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆော င်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒြာကျော် ဇင်နဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုတို့ဟာ လက်ရှိအခြေအနေအရ အကျပ်အ တည်းထဲ ကိုရောက် ရှိနေတာဖြစ်တာကြောင့် သူတို့ရြဲ့ ကိုးစားမှုကို သူတို့ကိုယ် တိုင်မမြင်တွေ့ရတာတော့ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။
အချုပ် အနှောင် အတားအဆီးေ တွကနေ အမြန်ဆုံးလွ တ်မြောက်ပြီး ရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့နေ ့တွေ ပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ အောက်ဆုံးတွင် ဇာတ်ကားရဲ့ Official Trailer လေးထည့်ထားပေးပါတယ်………..
လူငယ္ဒါရိုက္တာ ဏႀကီး ရဲ့ႀကိဳးစား မႈတစ္ခုၿဖ စ္တဲ့ ” What happened to the Wolf? ” ဇာတ္ ကားမွာ အိၿန ၵာေက်ာ္ဇင္နဲ႔ ပိုင္ၿဖိဳးသု တို႔ႏွစ္ေ ယာက္သား ဟာ အတြဲညီညီ နဲ႔အခ်ိတ္အ ဆ က္မိမိ သ႐ုပ္ေဆာင္ သြားခဲ့ၿပီး
လက္ရွိမွာေတာ့ Oldenburg International Film Festival တြင္ Seymour Cassel Award for Outstanding Performance အတြက္ Nomination တြင္ ႏွစ္ဦးစလုံး ပါဝင္ေန ခဲ့ပါတယ္။
ဒီဇာတ္ကားရဲ့ Official Trailer ကို ၾသဂုတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔မွာ ပရိသတ္ေတြကို ခ်ျပခဲ့ၿပီး Trailer မွာတင္ အေတာ္ေလး လူႀကိဳက္ မ်ားခဲ့ပါတယ္။
ဒီ႐ုပ္ရွင္ ကားကို ျမန္မာနိုင္ငံမွာၿပ သခြင့္မရေသးေပ မယ့္ ဂ်ာမနီနိုင္ ငံမွ Oldenburg International Film Festival တြင္ Official Competitation အတြက္ ေရြးခ်ယ္ျ ခင္းခံထား ရၿပီး World Premiere အျဖစ္ ျပသသြားမ ည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
Oldenburg International Film Festival ကို Oldenburg ၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔မွ (၁၉) ရက္ေန႔ထိ က်င္းပသြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇာတ္ ကားကာ ဒါရိုက္တာဏ ႀကီးရဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေနာက္ထပ္ဖန္တီး ခ်က္တ စ္ခုျဖစ္ၿပီး ဟာကြက္ မရွိေအာင္ ရိုက္ ကူးထားတယ္ဆိုတာ Trailer မွာတင္ သိသာလြန္းေ နပါတယ္။
ျမန္မာ့႐ုပ္ ရွင္ကိုအဆင့္ျမင့္ျ မင့္ၾကည့္ခ်င္တဲ့ပရိသ တ္ေတြအတြ က္ေတာ့ ေမၽွာ္ရက်ိဳးန ပ္မယ့္ ဇာတ္ကားေကာ င္းျဖစ္လာမွာပါ။
ဇာတ္ ကားမွာ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာ င္ခဲ့တဲ့ အိျႏၵာေက်ာ္ ဇင္နဲ႔ ပိုင္ၿဖိဳးသုတို႔ဟာ လက္ရွိအေျခအေနအရ အက်ပ္အ တည္းထဲ ကိုေရာက္ ရွိေနတာျဖစ္တာေၾကာင့္ သူတို႔ျရဲ့ ကိုးစားမႈကို သူတို႔ကိုယ္ တိုင္မျမင္ေတြ႕ရတာေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာပါပဲ။
အခ်ဳပ္ အေႏွာင္ အတားအဆီးေ တြကေန အျမန္ဆုံးလြ တ္ေျမာက္ၿပီး ေရႊေရာင္လႊမ္းတဲ့ေန ့ေတြ ျပန္လည္ပိုင္ဆိုင္နိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။